အဆိုပါ 80/20 ကိုလည်းပရိုဂရမ်ကိုသက်ရောက်သည် FromLinux | ChrisADR Linux မှ
ChrisADR | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 26/03/2018 11:09 | ပရိုဂရမ်းမင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှု (အကျိုးသက်ရောက်မှုများ) ၏ ၈၀% သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများ (အကြောင်းတရားများ) ၏ ၂၀% မှသာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှန်တရားဟာဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်စေတယ်၊ ​​ဒီဆောင်းပါးမှာဒီဖော်ပြချက်ရဲ့အခြေခံတွေကိုအနည်းငယ်ဖယ်ရှားပေးလိမ့်မယ်။
2 software စီမံကိန်းများ
3 abstraction သည်သော့ချက်ဖြစ်သည်
4.1 installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားလည်ခြင်း
5 စီမံကိန်းများကို ဦး တည်ရန်လွယ်ကူသည်
Business Process Management သည်၎င်း၏အင်္ဂလိပ်အတိုကောက်အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်း (အခြားအရာများမှ) သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် (သို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်) လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအမြင်အာရုံနားလည်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်း၏အဓိကအရည်အသွေးများအနက်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ၎င်းတို့ကို“ ရိုးရှင်း” စေနိုင်သည်ဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။
BPM ကားချပ်များတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုထားသောပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ကိရိယာများစွာကျွန်ုပ်သည်ဤဆောင်းပါးအတွက်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သောတစ်ခုမှာ BonitaSoft ဖြစ်သည်။ သငျသညျဖြစ်စဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်။ အနည်းငယ်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုလျှင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်နှင့်ဘာသာရပ်အပေါ်စာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အခုဗဟိုခေါင်းစဉ်ကိုပြန်သွားကြရအောင်။
ယနေ့ခေတ်တွင်စီမံကိန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နည်းစနစ်များစွာရှိသည်၊ ခေတ်မီသွက်လက်သော၊ ရိုးရာ၊ ရောထွေးမှုစသည်တို့ရှိသည်။ သူတို့အားလုံးမှာတူညီချက်တစ်ခုရှိသည် ပြင်ဆင်မှု။ ငါဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဒီဆော့ဗ်ဝဲစီမံကိန်းမှာသင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့ ၈၀% ဟာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပထမဆုံး ၂၀% ကိုအခြေခံလိမ့်မယ်။ ပြင်ဆင်မှု။
၎င်းသည်လက်တွေ့တွင် (လက်တွေ့တွင်ယုတ္တိမဲ့သောအခြားယုတ္တိရှိသည့်အရာများကဲ့သို့) အနည်းငယ်သာအသုံးချခြင်းသည်ယုတ္တိတန်သောအရာဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်မှုအကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ပြtheနာကိုနားလည်ရန်၊ ဖြေရှင်းချက်ကိုနားလည်ရန်နှင့်၎င်းထက်ပိုသောစွမ်းရည်ကိုနားလည်ရမည်။ ဖြစ်စဉ် ဖြေရှင်းချက်သက်ဆိုင်ကြောင်း။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်များ၌အနည်းဆုံးတွေ့ရှိရသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများမရှိခြင်း။ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများတွင်များသောအားဖြင့်ရောင်းလိုသောဆန္ဒသည်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းထက်ကျော်လွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုသူအများစုသည်အလုပ်သို့မဟုတ်နည်းပညာနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောကြောင့်သူတို့၏အလုပ်ဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်သူတို့သည်ကောင်းမွန်သောပြင်ဆင်မှုနှင့်မကိုက်ညီသောကုမ္ပဏီ / ကုန်ပစ္စည်းပေးသူနှင့်ဆုံမိလျှင်၎င်းသည် ၈၀% နီးပါးသေချာသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ စီမံကိန်း ဒါအလုပ်မလုပ်ပါဘူး.
ဒီဟာက GNU / Linux ကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းကသင်ယူခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်၊ အဲဒါကဆော့ဗ်ဝဲဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းမှာအဓိကအခန်းကဏ္toကိုထပ်ခါတလဲသက်သေပြတယ်။ ၏စွမ်းရည် စိတ္တဇ ၎င်းတို့ကိုပိုမိုရိုးရှင်းသောအရာများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ပြနာများသည်ကြော့ရှင်းသောကုဒ်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ရန်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည် တာရှည်ခံသော။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကြီးမားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံကိန်းများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောကြီးကျယ်သောစီမံကိန်းများနှင့်အဓိကကွာခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခင်ထင်, နားလည်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ ဖြစ်စဉ် စက္ကန့်နေစဉ် ထိန်းသိမ်းရန် နားလည်ရန်မလိုဘဲအလုပ်လုပ်ခြင်း.
ဤသည်မှာ Gentoo installer ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောစီမံကိန်း၏အမည်ဖြစ်သည်၊ သင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်း၊ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်များစွာသောဗိသုကာများကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်မှာ၎င်းကို kernel level, init system စသဖြင့်ပံ့ပိုးပေးသော configurations အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကိုငါပြောတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကငါ့ရဲ့စာတမ်းစီမံကိန်းလည်းဖြစ်တယ်၊ သိသာထင်ရှားတဲ့ငါ (လာမည့်နှစ်ဇူလိုင်လတိုင်အောင်) ဤအချိန်တိုအတွင်းဖြစ်နိုင်သမျှရွေးချယ်စရာများအားလုံးပါ ၀ င်သည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်အနည်းဆုံးအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သောစနစ်တစ်ခုကိုအခြေခံကျသောနည်းဖြင့်တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
BPM tools များမှတဆင့် Gentoo ကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အောင်မြင်စွာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောအဆင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်ရန် process diagram ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ခွဲများများစွာပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းသည်အတိုချုပ်ဖော်ပြပြီး ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် linear အဆင့် ၁၈ ခုရှိသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် linear တည်ဆောက်မှုရှိသော application တစ်ခုသည်အကောင်အထည်ဖော်ရန်လွယ်ကူပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်အပြိုင်အဆိုင်သည်လိုအပ်ပါက thread တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအရာများဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကငါတို့ကိုခွင့်ပြုတာပါပဲ စိတ္တဇ ဥပမာအားဖြင့်အမျိုးအစားအလိုက်ဖြစ်စဉ်များအစုသည် kernel thread ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်၎င်းထဲတွင် kernel ကိုအောင်မြင်စွာထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သောတိကျသောလုပ်ငန်းတာဝန်များရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားသိစေသည်။
ဤနည်းအားဖြင့် "ရှုပ်ထွေးသော" အဆင့်တစ်ခုစီသည်လိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမဆုံးရှုံးဘဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ "ရိုးရှင်းသော" အဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်အဆင့်ကိုလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲအသင်း၏မြင်သာမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ လက်စွဲစာအုပ်တစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းဖတ်ခြင်းထက်ပုံကိုကြည့်ရှုရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မငြင်းနိုင်ပါ။ 🙂
နောက်ထပ်ထင်ရှားသောအားသာချက်တစ်ခုမှာတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသောပရိုဂရမ်ဘာသာစကားမရှိခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အချိန်ကိုဖြုန်းတီးရန်မလိုဘဲယုတ္တိဗေဒဆန်းစစ်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤသည်သည်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပိုမိုထိရောက်သောဖြေရှင်းနည်းရှိသောကြောင့်စွန့်ပစ်ခံရလိမ့်မည်ကိုရှာဖွေရန်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အချိန်ဖြုန်းနိုင်သည့်အချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ Pseudo-code ("developer များ" ကလျစ်လျူရှုသော်လည်းမဖြစ်သင့်သောအရာ) pseudo-code တွင်မည်သည့်အဖြေများလိုပါလိမ့်မည်။
စီမံကိန်းများကို ဦး တည်ရန်လွယ်ကူသည်
ဤအယူအဆများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (မည်သည့်အရာမဆို) ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များအားအမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်နေရာတွင်အာရုံစိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ အဲဒါကမင်းရဲ့သိချင်စိတ်ကိုကူညီပေးပြီး BPM၊ algorithmics နဲ့ဘယ်သူတွေကိုသုတေသနလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးလဲဆိုတာငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကငါ့ကိုစာတမ်းနဲ့ကူညီဖို့အားပေးလိမ့်မယ်။ မင်္ဂလာပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ပရိုဂရမ်းမင်း » 80/20 ကိုလည်းအချိန်ဇယားဆွဲသက်ရောက်သည်
အလက်ဇန်းဒါး mayorga Muñoz ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ သင်၏ဗဟုသုတကိုမျှဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်သော်လည်း၎င်းသည်သုတေသနပြုရန်များစွာလိုအပ်ပြီးသဘောတရားများကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်၎င်းတို့ကို internalize လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အစပိုင်းတွင်ပြtheနာကရှုပ်ထွေးနေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏လိုအပ်ချက်များကိုကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်ဘက်တွင်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ငါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့်ထိရောက်စေရန်ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးကိုပုံဖော်ရာတွင်ဆော့ဖ်ဝဲရေးဆွဲသူများ၏အခန်းကဏ္ about နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုထင်သည်။
အလက်ဇန်းဒါး mayorga Muñozမှစာပြန်ရန်
မင်္ဂလာပါအလက်ဇန္ဒား၊ မျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင်၊ ဤမျှသေးငယ်သောအာကာသအတွင်းရှိအရာအားလုံးကိုအကျဉ်းချုံးရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသောဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုမရှုပ်ထွေးစေရန်အနည်းငယ်အထောက်အကူပြုနိုင်လျှင် - စနစ်များသည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားသင့်သည်၊ အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအခြေခံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဆိုလိုသည်။ ထိုအချိန်တွင် developer တစ်ယောက်သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်ကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်များ၏အသိပညာသည် developer များအားစနစ်များအလုံအလောက်တင်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုထားပြီးအနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအရာတစ်ခုအဖြစ်အလုံအလောက်နားလည်သည်။
ကုဒ်၏လှပမှုသည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုနားလည်ရန်နှင့်၎င်းကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းသောနည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းကိုအသုံးပြုထားသည်။ သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုအပ်ချက်ထက်အမှန်တကယ်နားလည်ခြင်းဖြင့်သာဖြစ်နိုင်သည်။ 🙂
ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို FOSS ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အနည်းငယ်ပုံသွင်းမည်ဆိုပါက၎င်းသည်ဆော့ဖ်ဝဲလိုအပ်ချက်ကိုသိရုံသာမက၎င်း၏နောက်ကွယ်ရှိအတွေးအခေါ်နှင့်၎င်းကိုမည်သို့မည်ကဲ့သို့ထိန်းသိမ်းမည်၊ မည်သူကမည်မျှထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နှင့်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ထိုအသိပညာအားလုံးကိုဆိုလိုသည်။ ။ , ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်
Odoo ကိုပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အားကောင်းသောဆော့ (ဖ်) ဝဲအဖြစ်ပြောင်းပါ